मुक्तिबन्धु | Ratopati
नेपाली जनमनका कुरा : हामीहरुले त राजा बन भनेका थिएनौँ ! access_timeभदौ १९, २०७६
“सामन्तका विरोधमा सामन्तहरु अर्थात् सामन्तहरुका विरोधमा सामन्त ! यसको अर्थ के हो भाइ ?” एक जना प्राध्यापकले सोध्नुभयो । “इतिहासका कुनै कालखण्डको कुरा होला !” मैले भनेँ । “ठ्याक्कै वर्तमानको कुरा हो !” प्राध्यापकले हाँस्दै भन्...
‘चोरका खुट्टा काट्’ भन्दा खुट्टा लुकाउने को ? access_timeसाउन २४, २०७६
मलाई लाग्छ उल्लिखित उखानले कुनै समयको अनुसन्धान विधिको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसको उपादेयता आजको समाजमा बाँकी छ कि छैन त्यो छुट्टै अध्ययनको विषय हो । जहाँसम्म समाचारको कुरा छ । हिजोआज कतिले समाचार पढ्नै छाडेका छन् । समाचार अपराध कथाको व्याख्यानमाला जस्तो लाग्न थालेको ...
जनपक्षीयताबाट धनपक्षीयतामा बसाइँ सरेका नयाँ ‘राजनेता’हरु access_timeसाउन १४, २०७६
यो हिन्दीभाषीहरुमा प्रचलित एउटा उखान हो— ‘जितना बडा पापी उतना बडा सन्त’ । यस उखानका सटीक दृष्टान्तहरु सन्तपरम्परामा भेटिन्छन् पनि । खोजीपस्दा यसका धार्मिक मनोवैज्ञानिक आधार पनि भेटिन सक्छन् । सन्त बन्न पहिले पापी बन्नैपर्छ भन्ने आप्तवचन अथवा सिद्धान्तसूत्रह...
शीतल निवासको नाचगान र नीरोको बाँसुरी access_timeसाउन १, २०७६
केही वर्षअगाडिको कुरा हो । हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा जनताका दुःखमा सम्वेदनशील हुन नसके बापत एक जना प्रभावशाली मन्त्रीको जागीर खुस्केको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । मैले समाचारमा प्रकाशित तिथिमिति र सम्बन्धित मन्त्रीको नाम नोटबुकमा टिपेको पनि थिएँ । अहिले मेरो ...
सिधा जनताका सोझा कविता: धमिरा, टिपर, पानीट्याङ्की र डोजर access_timeअसार ३०, २०७६
धमिराहरु विकासका सपना देख्छन् धमिराहरु सिंहदरबारमा गोलो बनाउँछन् विभिन्न दरबारमा गोलो बनाउँछन् धमिराहरु गोलोमा बसेरै स्वादिष्ट समाजवादका भोज खान्छन् धमिराहरु समाजवादी छन् । चिल्ला पोटिला र टलकदार धमिराहरु बज्रदन्ते छन् । जतिसुकै ...
अरिमट्ठ गलगाँड र अजिङ्ंगरको आड ! access_timeअसार २८, २०७६
मैले गतहप्ता केही लेखिनँ । “किन ?” एक जना वयोवृद्ध लेखक साथीले जिज्ञासा राख्नुभयो । मैले नबोल्दै वहाँले नै भन्नुभयो, “लेखेर काम पनि छैन । गतिछाडाहरु जो छन् प्रथमतः ती पढ्दैनन् । कथंकदाचित् पढेछन् भनेपनि सुध्रँदैनन् । अनि लेख्ने पनि के ? विकृतिको असम...
सिधा जनताका सोझा कविता access_timeअसार २८, २०७६
(१) धमिराहरु विकासका सपना देख्छन् धमिराहरु सिंहदरबारमा गोलो बनाउँछन् विभिन्न दरबारमा गोलो बनाउँछन् धमिराहरु गोलोमा बसेरै स्वादिष्ट समाजबादको भोज खान्छन् धमिराहरु समाजवादी छन् । चिल्ला पोटिला र टलकदार धमिराहरु बज्रदन्ते छन्...
कहाँ कहाँ छ सामन्तवाद ? access_timeअसार १४, २०७६
गएको शुक्रबार । अपराह्णको समय थियो । म घलेगाउँ पुगेको थिएँ । लच्छू काकासँग हल्का जानपहिचान थियो । उहाँका घरतिर लागेँ । म पुग्दा लच्छू काका गाईलाई घाँस दिँदै हुनुहुन्थ्यो । ९० कटेका उहाँलाई धेरैले हजुरबा भन्छन् । म काका भन्छु । अभिवादनपछि “काकाको स्व...
दम्भका विरुद्ध प्रकाशस्तम्भ बनेका जनता ! access_timeअसार ७, २०७६
ओली नेतृत्वको सरकारले यस पटक हठधर्मिता देखाएन । आफूलाई सँच्याउन अघिस¥यो । राम्रो भयो । नेपाली जनजीवनमा प्रचलित एउटा भनाइ छ— ‘विनम्रताले आयु बढ्छ ! दम्भले घट्छ !!’ दम्भ जनतालाई मन पर्दैन । मेरो छिमेकमा एक जना ९२ वर्षीय वरिष्ठ किसान हुन...
निराशाको व्यूहभेदनमा प्रयत्नशील नेपाली जनता ! access_timeअसार ४, २०७६
मुलुकको सम्भावित प्रगतिप्रति हामी तमाम जनतामा आशा हुर्कनुपथ्र्यो, निराशा हुर्केको छ । छन तः आशाको अरुणोदय पनि छ । सँगै खग्रास ग्रहणको सङ्केत पनि छ । आकाशमा प्रदूषणको कालो–निलो बादल त्यत्तिकै विकराल छ । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको मुसलधारे विष–बर्षा वर्षौंदेखि ...
एक पानामा छाप ठोक्दा हजार पाना रातो ! access_timeजेठ २९, २०७६
यसै हप्ताको कुरा हो । गाउँ गएको थिएँ । गाउँनजिकै एउटा ढिस्कामा उभिएर हेरेँ, कपाल खुइलिएको, ठाउँ ठाउँ खटिरा आएको, बुढो टाउको जस्तो देखिएको थियो गाउँ । गाउमाँ पहिलेको सोन्दर्य र हरियाली कतै थिएन । घरहरु बुढाबुढीलाई भान्छा र ओछ्यान जुटाइदिएर टामाटुमी थिए ।...
नेताहरु जनताबाट कटेपछि देश र जनताका रहँदैनन् access_timeजेठ २५, २०७६
दक्षिणी छिमेकीबाट दिनोदिन नेपालको सिमाना मिचिँदा नेपाली राजनेताहरु किन बोल्दैनन् ? सरकार किन बोल्दैन ? सीमाक्षेत्रमा र छिमेकी मुलुकभित्रै पनि समय समयमा नेपालीहरु लुटिँदा कुटिँदा नेपालका राजनेताहरु किन बोल्दैनन् ? सरकार किन बोल्दैन ? छिमेकी मुलुकले विना सूचना र अ...
रामायणकी मन्थराको विरक्तिगीत जस्तै बजेट । access_timeजेठ १९, २०७६
रामायणका परम्परागत लेखकहरुले दशरथदरबारकी दासी बिचरी मन्थरालाई कैकयीको मनोविज्ञान भाँडेर रामलाई वनवास पठाउने षड्यन्त्रकारी महिलाका रुपमा चित्रण गरे । पछिका सन्त लेखक तुलसीदासलाई भने यो प्रसङ्ग त्यति चित्त बुझ्दो दो लागेन । उनले आफ्नो मानस रामायणमा मन्थराला...
खर्कमा नुन छर्ने परम्परा र सांसदलाई विकास बजेट ! access_timeजेठ १२, २०७६
राणाकालीन पुराना साहू सामन्तका नीति र प्रवृत्तिका कुरा हुन् । त्यसताका विशेषतः लेकाली पहाडी भेगमा वरपर गाउँबस्तीका साहूहरुले ऐलानी जमीन थुप्रै थुप्रै ओगट्थे र आफ्ना चौपाया चराउने र गोठ राख्ने खर्क बनाउँथे । खर्कमा गाइ बाख्रा भेडाको रेखदेख गर्नका लागि आवश्यक गोठालाहरु ...
किसिम किसिमका सर्टिफिकेट, किसिम किसिमका राजनेता ! access_timeजेठ ११, २०७६
सर्टिफिकेटलाई आम नेपाली जनजिब्रोले ‘साठीपिकेट’ भन्छ । गाउँ गाउँमा विद्यालय पुगेपछि ‘साठीपिकेट’ शब्द अहिले सामान्य जनजीवनको बोलीचालीमा घुलमिल भइसकेको छ । पहिले नेपाली जनजिब्रोले क्लासलाई किलाँस पनि भन्थ्यो । आठ क्लास पढेपछि मिडिलपा...
आक्रोश, कुण्ठा, निम्छरा प्रश्नहरु र लोककथाको घण्टाकर्ण ! access_timeजेठ ४, २०७६
मानिसहरु आक्रोशित किन हुन्छन् ? आक्रोश के हो ? कुण्ठा के हो ? अनि निम्छरो भन्नाले के बुझ्नुपर्छ ? के आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा जस्ता शव्दहरु कुनै प्रश्नका विशेषण हुन सक्छन् ? यी विशेषण लगाइदिएपछि प्रश्न कसैका अगाडि कस्तो भएर उभिन्छ ? हिजो आज मेरा मनमा प्रायः यिनै कुरा खेलि नै...
मेरो सरकार भनेवापत पनि जनताले आभारी हुनुपर्ने कि ? access_timeबैशाख २७, २०७६
“सोधेर हेर्नुस् — कमाराहरुलाई मालिकको ‘लात्तीदान’ पनि ‘शान’जस्तो लाग्छ । मलिक हुनुको ‘पहिचान’जस्तो लाग्छ । कति यस्ता कमाराहरु आज पनि छन् नेपालमा जसलाई — सत्तासीनहरुको सवारीले जनताको बाटो छेकिनु पनि &ls...
‘जले विष्णु स्थले विष्णुः’नेकपाका नेता कामरेड विष्णु ! access_timeबैशाख २१, २०७६
वर्षौंअघिको कुरा हो । त्यसताका अहिलेको जस्तो हवाइयात्रा प्रचलनमा आएको थिएन । समुद्रपार मुलुकहरुको यात्रा गर्नुपर्दा पानीजहाजबाट गरिन्थ्यो । एक पटक एक जना नाम चलेको भारतेली स्वामीबाबा आफ्ना दुई जना चेलाका साथ बेलायत यात्रामा निस्केका थिए । मध्य दिनको समय...
शब्दहरुमाथि पनि यो कठोर लाठीचार्ज किन ? access_timeबैशाख १८, २०७६
‘ती दिन थिए, गए यी दिन आएका छन् पहिले तिनले धपाए अहिले यिनले चपाएका छन् ।’ हामी जनताका लागि त लिसो पासो, पासो लिसो नै हो । मानौं भोका कागका अगाडि बेल पाकेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको विकासे बेल । बेल पौष्टिक हुन्छ । यो औषधीय गुणयुक्त ...
जनजीवनका बाटो छेक्ने सत्ताका पर्खालहरु access_timeबैशाख १४, २०७६
“राष्टपतिको एक उडानले नागरिकका २०० उडान अस्तव्यस्त । दिनभरी नै उडान प्रभावित ।” शुक्रबार राजधानीबाट प्रकाशित एउटा खबरकागतको मुख्य खबरको ठुला—अक्षरे शीर्षक थियो यो । शीर्षक पढ्दै मैले महाभारतका एक जब्बर पात्र भीमसेन सम्भेmँ । भीमसेनका पाखुरामा हजार ह...
सुखसमृद्धिका व्यासलाई सलाम ठोक्दै नयाँ वर्ष ! access_timeचैत ३०, २०७५
विभिन्न समृद्ध संस्कृतिका फूलबगैँचा रहिआएको नेपाल आर्थिक क्षेत्रमा गरीब हुँदा पनि संस्कृतिका क्षेत्रमा समृद्ध छ । धनी छ । नयाँ वर्षका क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै समृद्ध छ । यहाँ वर्षभरीमा अनेकौं नयाँ वर्षहरु आउँछन् । हरेक नयाँ वर्षका आफ्ना आफ्ना सांस्कृतिक रीतिरिवाज, परम्पर...
सुख समृद्धिको दृष्टान्त सत्तासीनहरु आफैँ मात्र ? access_timeचैत १६, २०७५
हामीकहाँ अहिले सरकारी पहलमा सजधजका साथ वृहत् समृद्धिपुराण लागेको छ । देशी विदेशी श्रोता उपश्रोताहरु जुटेका छन् । मुलुक जात्रामय बनेको छ । समृद्धिपुराणका वाचक उपवाचकहरु विभिन्न मन्चहरुमा देखिन्छन्, सुनिन्छन् । जो मन्चहरुमा देखिन्छन्, सुनिन्छन् ती एक से एक समृ...
दायाँतिर अंकमाल वायाँतिर लात्ती : नयाँ समयमा पुरानै चटक access_timeचैत ७, २०७५
(१) कुम्भकर्णको भुँडी । पुराना रामायणहरुमा कुम्भकर्णका भुँडीको विस्तृत चर्चा गरिएको पढ्न पाइन्छ । वेला वेला लङ्काको राजकीय सभामा रावण पनि भन्थ्यो, भुँडी हुनु त हाम्रो भाइ कुम्भकर्णको जस्तो हुनु । उसको भुँडीमा के छैन ? स्वर्गको नन्दन बन, ऐरावत हात्ती, उच्चैःश्रवा घोडा, पहेँ...
नेपालको राजनीतिमा जेलजीवनको महात्म्य access_timeफागुन २६, २०७५
अन्तोन चेखबको एउटा कथा छ बाजी । यस कथामा एक चन्चलाश्री सम्पत्तिको धनी र अर्को अकिन्चनजस्तो गरीव समेत गरी दुई साथी पात्र छन् । एक दिन कुरै कुरामा धनी पात्रले गरीब पात्रसँग ठट्टैठट्टामा बाजी राख्दै भन्छ, ल तिमी १५ वर्ष जेल बस म तिमीलाई मेरो भएभरको सम्पत्ति सवै सर्लक्कै दिन्छु...